Soomaali laga celiyay dalka Uganda
Ciidamada Amniga Uganda ayaa garoonka Entebbe dib uga celiyay dhalinyarro ka timid Somalia iyo qurbaha.
Ciidamada ammaanku waxay qorshahan bilaabeen kadib markii ay howlgallo kala duwan toddobaadkii tegay kusoo qabteen dad Soomaali ah oo ay la xariirinayaan falal argagixiso ah. Dadka dhawaan ay soo qabteen waxaa ku jira Soomaali ka yimid gudaha Soomaaliya iyo nin Soomaali ah oo heystay dhalashada dalka Australia oo ay si wada-jir ah u baadi-goobayeen ciidamada ammaanka ee Uganda iyo Kenya.
Dadka laga celiyay garoonka Entebbe, waxaa ku jira wiil dhalinyaro ah oo ka yimid dalka Pakistan, waxaana la xaqiijiyay in dib u celintiisa ay la xariirto qaladaad dhinaca socdaalka ah.
Dalka Uganda oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso iney 10 kun kor u dhaafayaan ayaan soo gelitaanka dalkaasi wax dhibaato ah kala kulmi jirin, iyagoo markay yimaadaan si xor ah uga shaqeysan kara, balse dhibaatada heysata ayaa lagu sheegay iney ugu weyn tahay inesan jirin cid u dhaxeysa iyaga iyo dowladda ay martida u yihiin.
Toddobaadkii hore ciidamada booliska ee Uganda ayaa ku eedeeyey ururka Al-Shabaab inay ka dambeeysay bam gacmeed la dhigay mid ka mid ah bulaacadaha mara wadooyinka Magaalada Kampala. Bamkaasi ayaa la soo saaray isagoon qarxin.
Howlgallo ay ciidamadu ku sameeyeen Hoteellada ay Soomaalidu maamusho qaarkood ayaa la sheegayaa inay qeyb ka yihiin go’aanka ay Uganda dib isaga masaafurineyso qaar ka mid ah Soomaalida dalkaasi soo gashay.
Warbixinta ka hadlay arrintaasi qeybta hoose ee qoraalkan ka dhagayso.